Walfaannee shallaguu ufmaa
Maadheelee ufmaan daataan ajaja ufmaan guutuudhaan yookiin ajaja walfaanneedhaan ufmaan guutuu dandeessa.
Ufmaan guutuutti fayyadamuu
Guutni ufmaa walfaannee deetaa ufmaan sarxaa murtaa'e irratti hundaa'uudhaan uuma.
Wardii irratti, man'ee keessa cuqaasiitii, lakkoofsa barreessi.
Maadhee biraa keessa cuqaasiitii achumaan maadhee bakka lakkoofsa itti barreessite deebisii cuqaasi.
Qabannoo guuta jala xiyyoo mirgaa maadhee dalga maadheelee kan guutuu barbaaddu harkisiitii qabduu hantuutee gallakkisi.
Man'eeleen lakkoofsota oleedhaan guutamu.
Tarree guyyoota walitti aanan saffisaan uumuuf, man'ee keessatti Wixata galchiitii qabannoo guutaa harkisi.
Sarjaawwan duwwaa garee deetaa ammee hunda ufmaan guutuuf qabannoo guutaa mirgaan cuqaasuu dandeessa.Fakkeenyaaf,jalqaba Amajji A1 keessatti galchiitii baatiilee kudha lama sarjaa jalqabaa keessaa argachuuf qabannoo guutaa gadi A12 tti harkisi.Amma gatiiwwan muraasa gara B1 fi C1 galchi.Man'eelee lamaan sana filadhuutii qabannoo guutaa lamcuqaasi.Kun ufmaan garee deetaa B1:C12 guuta.
Walfaannee qindaa'aan fayyadamuu
Hammanga maadhee wardii keessaa kan guutuu barbaaddu filadhu.
Gulaali - Filadhu - Walfaannee fili.
Ulaagaalee walfaanneedhaaf filadhu.
Yoo walfaannee sorooroo filattu,daballi kan ati galchitu gara lakkoofsa walitti aanuutti walfaannee keessatti gatii itti aanu uumuuf ida'ama.
Yoo walfaannee guddina filattu,daballi kan ati galchitu gara lakkoofsa walitti aanuutti walfaannee keessatti gatii itti aanu uumuuf baay'ata.
Yoo walfaannee guyyaa filattu,daballi kan ati galchitu yuuniitii yeroo kan ifteessitutti dabalama.
Title is: Walfaannee shallaguu ufmaa